Yintoni i-Polar Bond? Inkcazo kunye nemizekelo
Inkcazo yePolar Bond kunye nemizekelo (i-Polar Covalent Bond)
Qonda iibhondi ze-Polar eKhemistry
Izibophelelo zeMichiza zingabalwa njengokuba zi-polar okanye ezingekho mhlaba. Umehluko yindlela ama-electron ekhonkco ahlelwe ngayo.
Inkcazo yePolar Bond
Isibophelelo se- polar sibophelelana ngokudibeneyo phakathi kwama- atom amabini apho ii- electron ezenza ubophelelo zihanjiswa ngokungalingani. Oku kubangela ukuba i-molecule ibe nomzuzu omncinci we- dipole wombane apho isiphelo esisodwa sinezinto ezintle kwaye enye iyancipha.
Umrhumo we-dipoles kagesi ungaphantsi kwerhafu epheleleyo yeyunithi, ngoko ke ithathwa njengetyala elincinci kwaye lichazwe yile delta kunye (δ +) kunye ne-delta minus (δ-). Ngenxa yokuba iintlawulo ezichanekileyo nezingalunganga ziyahlukana kwi-bond, iimlekyuli ezinama-polar covalent bonds zidibanisa ne-dipoles kwezinye iimolekyuli. Oku kuvelisa i-dipole-dipole ye-intermolecular force phakathi kwama-molecule. A
Izibophelelo ze-Polar yindlela yokuhlukanisa phakathi kokubambisana kunye ne- ionic ecacileyo. Ubhonkco obuqinileyo obuqinileyo (izibophelelwano ezingekho phantsi kwee-collar) zikwabelana ngee-electron zibini ngokulinganayo phakathi kwama-athomu. Ngokuqinisekileyo, ukubambisana okungabikho kwemali kuyenzeka kuphela xa ii-athomu zifana nomnye (umzekelo, i-H 2 gesi), kodwa iikhemikhali ziqwalasela nayiphi na intsebenziswano phakathi kwama-athomu ngokwahlukileyo kwi-electronegativity engaphantsi kwe-0.4 ukuba ibe yintsebenziswano engekhoyo. I-carbon dioxide (CO 2 ) kunye ne-metethane (CH 4 ) zii-molecule ezingenayo i-molecule.
Kwiibhondi ze-ioni, ii-electron ekhonkxeni zixhomekeke kwi-atom enye enye (umzekelo, i-NaCl).
Ifom ye-ionic ifom phakathi kwee-athomu xa u -hluko we-electronegativity phakathi kwabo ungaphezu kwe-1.7. Izibophelelo ze-ionic zezona zinto zidibanisa ngokupheleleyo, ngoko isigama sinokudideka.
Khawukhumbule nje ukukhonkxa kwe-polar kubhekisela kuhlobo lwe-bond covalent apho ii-electron ezingabalwa ngokulinganayo kwaye ixabiso le-electronegativity lihluke kakhulu.
Ifom yeenqwelo ezinama-povalent fom phakathi kwama-athomu ngokuhlukana kobungakanani bombuso phakathi kwe-0.4 no-1.7.
Imizekelo yeeMleksile eneeBolar Covalent Bonds
Amanzi (H 2 O) i-molecule ehlanganisiweyo. Ixabiso le-electronegativity ye-oksijini ngu-3.44, ngelixa i-electronegativity ye-hydrogen i-2.20. Ukungalingani kwi-akhawunti ye-electron distribution for the shape of the molecule. I-oksijeni "ecaleni" yelolekyuli inetyala elibi, ngelixa i-athomu ezimbini ze-hydrogen (kwelinye "icala") zinetyala elihle.
I-Hydrogen fluoride (HF) ngowomnye umzekelo we-molecule enesibophelelo esivumelanayo. I-Fluorine i-athomu yokukhetha i-electronegative, ngoko ke i-electron ekhonkxeni ihambelana kakhulu ne-atom ye-fluor kune-atom ye-hydrogen. Iifomu ze-dipole kunye necandelo le-fluorine enexabiso elibi lomnatha kunye necandelo le-hydrogen elinenetha elihle. I-hydrodrogen fluoride yi-molecule eqhelekileyo kuba kukho ii-atom ezimbini kuphela, ngoko akukho enye i-geometry inokwenzeka.
I-molecule ye-ammonia (NH 3 ) inezibophelelwano eziphakathi kwe-nitrogen ne-athomu ye-hydrogen. I-dipolole yinto yokuba i-atrojeni ye-nitrojeni ihlawuliswa kakubi, kunye neathathu i-athomu ye-hydrogen kwicala elinye le-athomu ye-nitrogeni enexabiso elihle.
Ziziphi Iimpawu zeePowla zePowlar?
Ifom ye-polar covalent fomu phakathi kwama-atom angama-atom angama-atom ahlukeneyo ahlukeneyo. Ngenxa yokuba ixabiso le-electronegativity lihluke kancinci, idilesi zombini yokudibanisa ayikwabelwana ngokufanayo phakathi kwee-athomu. Ngokomzekelo, iibhondi ezinama-povalent zenziwe ngokuqhelekileyo phakathi kwe-hydrogen kunye nayiphi na enye engeyiyo.
Ixabiso lokhetho lobukhulu phakathi kweensimbi kunye ne-nonmetals likhulu, ngoko ke bakha izibophelelo ze-ioni kunye nomnye.
Umxube weHeterogeneous - Inkcazo kunye nemizekelo
I-Novena ku-Saint Teresa wase-Avila
Abalawuli baseNetherlands / eHolland
Izinto ezili-10 zeMegalodon ziyakwazi ukutyhila ngokupheleleyo
I-Franchise Tags kunye noTshintsho lweTekisi kwi-NFL
Ukubhiyozela iItransitri Traditions nezingane
Iirekhodi zeNinzi iiHoles-In-One kwiGalofu
Iinkcukacha ezintlanu ngokukhawuleza ngePZEVs
Flew, Flu, kunye neFlue